192.168.1.254 ndiko private IP Address kushandiswa sezvo Default Router IP kero kuti zvakawanda routers uye modems. 192.168.1.254 Login rinobvumira arun kuti kuwana, kugadzira uye ita kuti dzifambirane Kurongwa. The IP 192.168.1.254 Makaichengeterwa kushandisa voga network.
192.168.1.254 IP Address Admin Login unokubvumira kuwana kwenyu ADSL router. Kana mushandisi anofanira kuwana router wako pasina kushandisa waya, ari IP Kero remitemo 192.168.1.254 zvinoita.
192.168.1.254 ndiyo private IP nokuda routers, modems, uye broadbands uye kunongoreva kuti mudziyo mukati ichi private rezvebonde kana IP hazvigoni kupindamo zvakananga kubva Indaneti uchishandisa IP ichi private, asi mumwe mudziyo pamusoro yomunharaunda rezvebonde kubatana anogona batanidza vamwe mudziyo upi vo kuti samambure.
Kune vamwe routers uye Modem pezvitsiga kusanganisira Linksys Routers uye Modems, Westell DSL Modems, Alcatel Modems, 3ru Routers, uye Modems, Billion Routers uye Modems uye muchiso dzakawanda dzimwe routers kazhinji pevara 192.168.1.254 sezvo default IP kero nokuda routers.
Log kupinda 192.168.1.254 IP Address
A mushandisi anogona kungoti kupedza 192.168.1.254 Login danho nezvikwiriso anotevera.
Step: 1- Batanidza PC yako kana mudziyo kuti router pomumbure kubudikidza Ethernet wire kana Wi-Fi.
Step: 2- Vhura chero browsers wako PC uye mhando URL http:://192.168.l.254 mubrowser rako.
Step: 3- Kupinda default router Username uye pasiwedhi nemazvo uye iwe uchava pamusoro router wenyu IP kero 192.168.1.254.
routers Most pamwe default IP Address pamusoro 192.168.1.254 shandisa Username uye pasiwedhi “arun“. Kunyange kana iwe akakanganwa yako router Username uye pasiwedhi ipapo unogona kutora rubatsiro 192.168.1.254 Login uye anogona itangezve kuti router.
Ko kana ini akakanganwa Password yangu?
Danho-1: Chinja kure kana kudzima Router uri kushandisa.
Danho-2: Press mubatirire Reset bhatani necheseri Panel kuti 5 kuti 10 kana 15 masekondi ane pamusoro wakananga mbambo kana ane kambasi kana aine tsono uye panguva imwecheteyo restart kana chijana pamusoro Router.
Step- 3: ikozvino, kusunungura Reset bhatani uye kumirira zano reboot.
Step 4: ikozvino, uchakwanisa kubatanidza mudziyo kombiyuta yako router dzenyu Ethernet Network wire kana kuburikidza kushandisa Wi-Fi kubatanidza.
Step 5: Batanidza kuti mambure router wako itangezve ikozvino.
Ndinovimba this post rakabatsira ngaakupereredzei 192.168.1.254 Login danho uye zvakakwana kuti 192.168.1.254 Admin Login danho. Kana uchine chero nhamo kana matambudziko zvino kupindura pazasi Ngatidzoke vazive. For zvakawanda pamusoro 192.168.1.254 IP Address, vanoshanyira pamutemo Website ikozvino.
192.168.1.254 changed pasiwedhi192.168.1.254 Reset Passwordhttps://192.168.1.254 Login